Tsenam-panjakana : andrasana ny mangarahara | NewsMada
Tsenam-panjakana : andrasana ny mangarahara
Nanantanteraka ny fianianany teo anatrehan’ny mpitsara eo anivon’ny Fitsarana tampony ny tale jeneraly vaovao misahana ny tsenam-panjakana na ny Autorités de éégulation des marchés publics (ARMP), , ny herinandro lasa teo. ARMP, fahefana iray eto amin’ny firenena mandrindra ny tsenam-panjakana. Lafiny telo ny tsy maintsy arahina amin’izany : mamolavola ireo rijan-teny mifandraika amin’ny lalàn’ny tsenam-panjakana, manara-maso ireo mampiasa azy rehetra, ary mandray ny fitoriana avy amin’ny sehatra tsy miankina, raha misy.
Tontosaina ao anatin’ny mangarahara tanteraka izany, hialana amin’ny kolikoly isan’ambaratongany. Misy, araka izany, ny fomba hitsarana na nanara-dalàna na tsia ny famindrana tsenam-panjakana, mifototra amin’ireo fehezan-dalàna sy fotokevi-dehibe mifehy ny famindrana azy. Fahafahana miditra amin’ny zavatra ilain’ny fanjakana, ahafahan’ny mpandraharaha rehetra mamaly malalaka ny antso fanaikana tolobidy. Faritana manokana ny fitovian-jo amin’ny fikarakarana ireo mpifaninana, hialana amin’ny fitongilanana.
Koa ao anatin’ny mangarahara sy apetraka mazava amin’ny rehetra fa tsy manana ny afenina ny ARMP. Nanamafy ny minisitry ny Fitantanam-bola sy ny tetibola, Rakotoarimanana Gervais, ny amin’ny fanarahan-dalàna ny fampiasana ny volam-bahoaka, hisian’ny tamberin’andraikitra amin’ireo vahoaka mpanara-maso ireo. Maro, noho izany, ireo adidy miandry ity tale jeneraly vaovao ity.